राजनीति सेवा कि व्यवसाय ? - प्रिन्ट संस्करण - कान्तिपुर समाचार
‘पूर्व सांसदलाई पेन्सन शीर्षक’प्रति थोरै पनि आपत्ति होइन । आपत्ति हाम्रो राजनीतिक संस्कार र लालचको राजनीतिप्रति हो । पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा उपलब्ध गराउने विधेयक पेसको तयारी भइरहँदा पूर्व सांसदलाई समेत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा गृहकार्य सुरु भएको छ ।
यसो हो भने राजनीतिलाई पेसामा रूपान्तरण गर्ने नयाँ विधेयक संसद्मा किन प्रस्तुत नगर्ने ? पटक–पटक सांसदले आफ्नो सुविधा बढाउने विधेयकमा सहमति जनाउँदै आइरहेकै हुन् । सांसदहरू सेवाभन्दा ज्यादा सुविधाभोगी छन् भन्ने धारणाको विकास भइरहेको सन्दर्भमा सांसद पद सेवाका लागि होइन, पेसाका लागि सिर्जना गरिएको हो भन्ने धारणाको विकास गर्दा के फरक पर्ला त ? वास्तविकताको धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने सांसद सेवाको अवकाशपछि उनीहरूको जीवनयापन खातिर सरकारले चासो राख्नु स्वाभाविक पनि हो । तर जुन देशमा आम नागरिकको जीवनस्तर अत्यन्तै दयनीय छ, रोजगारीको समस्या डरलाग्दो रूपमा अघि बढ्दैछ, युवाशक्ति पलायनले देश रित्तो–रित्तो
हुँदैछ । आशा र भरोसाका विम्बहरू धुमिल हुँदैछन् । त्यस्तो देशले आर्थिक विकासका अवधारणा अघि बढाउने कि देशको सम्पत्तिलाई लुटको धनका रूपमा व्यक्ति–व्यक्तिलाई वितरण गर्दै जाने ?
प्रकाशित : भाद्र २९, २०७४ १०:१९
अहिले मुलुकमा एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगका ठूलठूला काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन् । २५ किलोग्राम सुन काण्ड, ८८ किलोग्राम सुन काण्ड र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड ।
पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक हिनामिना गरेका प्रमाण विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट छताछुल्ल भएका छन् ।